Somaliland Oo Lagu Marti Qaaday Shirka Cimiladda Aduunka Oo Maraykanka Ka Dhacaya | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Somaliland Oo Lagu Marti Qaaday Shirka Cimiladda Aduunka Oo Maraykanka Ka Dhacaya
Published on August 30, 2018 by sdwo · No Comments
Hargaysa (SDWO): Dawladda Somaliland ayaa lagu casuumay shirka caalamiga ah ee cimiladda aduunka oo sanadkan ka qabsoomaya dalka Maraykanka. Siday sheegtay wasiirka degaanka iyo horumarinta Somaliland.
Shirkaasi waxaa ka qayb gelaya dad gaadhaya 300 oo qof oo isugu jira madax iyo masuuliyiin dalalka caalamka ka kala socda, kuwaasoo afar dal oo Afrikaan ah oo Somaliland ka mid tahay.
Waxaana la filayaa in shirkaasi furmi doono 12-ka ilaa 14-ka bisha September ee fooda innagu soo haysa, isla markaana khubarada ka qayb gelaysa ee aqoonta u leh arrimaha degaanka iyo isbedelka cimiladda ay si weyn u falan qayn doonaan.
Wasiirka degaanka iyo horumarinta reer baadiyaha Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare, ayaa faahfaahin ka bixisay shirkaasi cimiladda ee Somaliland lagu marti qaaday waxay tidhi “Dalalka Afrika 4 qof ayaanu nahay.
Waa dalka Ghana, Mousenbiqe, Zambia iyo Somaliland. Waxaa ka qayb gelaya 22 qof oo caalamka laga kala keenay.
Shirkani waa shir caalami ah, oo lagu marti qaaday dad gaadhaya 300 oo qof, oo madax bani ay ku jiraan.
Waxaanu daba socdaa shirkii Paris lagu qabtay dhamaadkii sanadkii 2015-kii, 2016-kii na la ansixiyay qodobadii ka soo baxay shirkaa hore ee 2015-kii”.